Waa kuma Saxaabigii Shinnidu Difaacday? Gaaldiid Page 46760552713
Home > Xogta > Waa kuma Saxaabigii Shinnidu Difaacday?
Maxaad ka taqaanaa Saxaabigii Shinnidu Difaacda?
Saxaabiga Caasim ibnu Thaabit oo ahaa nin reer ansaareed ah, wuxuu ka qaybgalay dagaalkii Badar iyo Uxudba. Dagaalkii Uxud wuxuu ku dilay laba wiil oo walaalo ahaa oo uu dhalay ninka la dhaho Dalxa ibnu Dalxa. Labada wiil hooyadeed oo ahayd reer Makkah ayaa nadar ku gashay inay u aargudo wiilasheeda, waxayna ku nadartay in madaxa Caasim ibnu Thaabit ku cabto khamiriga, cidii u keenta madixiisana ay siinayso boqol halaad oo geela.
Sanadkii afaraad ee hijriyada waxa usoo wafdiyey nabiga scw koox kamida qabiilka Cudal iyo Qaara, waxayna kooxdani nabiga u sheegeen in qabiilkooda dad ka islaameen oo ayna u baahanyihiin dad saxaabada ah oo soo bara diinta Islaamka. Nabigu scw kooxdaas wuxuu ku daray toban nin oo uu hogaaminayo Caasim ibnu Thaamit oo uuna ku jiro Khubaab ibnu Cadiyy.
Saxaabadii iyo kooxdii way is raaceen, markii ay gaadheen deegaanka Rajiix ayey kooxdii lasocotay saxaabadu ay umaleegta saxaabada shirqool waxayna u habarwacdeen qabiiladoodii, kadibna saxaabadii ayaa lasoo hareereeyey, ayagiina buur ayey fuuleen. Nimankii Carbeed ee shirqoolka maleegay ayaa hadana uballanqaaday inaanay dilayn haday is dhiibaan, kadibna sadex kamid ah ayaa isasoo dhiibay hase ahaatee hadana mar laabaad ayey ballan buriyeen carabtii, waxayna laba kamida saxaabadaas u gacan galiyeen reer Qureesh si ay ugu dilaan ragii lagu dilay dagaalkii Badar, ninkii sadexaadna wuu dagaalamay waanay dileen.
Ragii kale ee buurta ku hadhay ayagana waa lala dagaalamay wayna dileen, ragaas waxa kamid ahaa Caasim ibnu Thaabit, isaguna wuu dagaalamay balse falaadhihii iyo leebabkii ayaa ka dhamaaday, markii uu arkay in la dilayo ayuu Alle baryey oo uu dhahay: “Ilaahayow sida aan u difaacayey diintaada galnkii hore adiguna jidhkayga u difaac galinka danbe”
Caasim waa la dilay, waxayna gaaladii doontay inay madaxa ka gooyaan si ay u helaan abaalmarkii boqolka halaad, balse waxa Alle usoo diray maydkii Caasim shini ku xomtay jidhkii saxaabigaas, markaasay carabtii tidhi: Galinka danbe ayaan usoo laabanaynaa.
Nimankii Carbeed markay soo laabteen waxay waayeen maydkii Caasim, mise waxa yimid roob waxaana maydkiisii qaaday daad roobkaasi watay, waana la garan waayey meesha uu aaday Caasim, sidii Caasim u difaacay diintii Allah ayaa Allena udifaacay jidhkiisii markii uu dhintay.
Siirada ibnu Hishaam, siirada nabiga
Koorsada barasha Computer